केटीले मन पराउँछे भन्ने सुनेर तीनदिन सम्म स्कुल नै गईन :आर्यन सिग्देल - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
काठमाण्डौ असोज ३० ✎
ग्वाँ ग्वाँ रोएर आइ लव यु भने पछि अत्तालिएर लव यु टु भने:
अभिनेता आर्यन सिग्देल अभिनित चलचित्र रुद्रप्रिया कार्तिक दुई गते रिलिज हुदै छ । सात–आठ वर्ष पछि रेखा थापा संग संगै काम गरेका आर्यनले कुनै हराएको चिज भेट्दा खुशी लागे झै महसुस भएको बताएका छन । आर्यनले आफ्नो बाल्यकाल ,युवा अबस्था र सिनेमाका बारेमा हामीसंग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश उनकै लयमा ।
कोठामा टि.भी. हेरेर नाच्ने गर्थे
बाल्यकाल मेरो यही थानकोट मै बित्यो । म सानै देखि अलि फरक स्वभावको थिए । अहिले पनि त्यस्तै नै छु । मेरो आफ्नो छुटै कोठा थियो । म कोठा थुनेर बस्थेँ । डान्सहरु गर्थे अलि अलि । सानोमा के गरियो याद छैन त्यो हार्ड डिस्कमा छैन (हासोँ) । छुट्टिको दिन परिवारहरु सबै मिलेर सिनेमा हेर्न गईन्थ्यो । सिनेमा हेरेर त्यहाँको बाल कलाकारको अभिनय आएर घरमा गर्ने गर्थे । त्यस्तो गरेको बदमासी छैन । घरमा भएको बेलामा सामान बिगार्ने कामहरु म धेरै गर्ने गर्थे । ममीले त्यस्तो पिटी हाल्नु हुदैनथ्यो । बाबाले भने काम बिगारे पनि पिटी हाल्नु हुन्थ्यो । हाम्रो घर नजिकै एउटा भिडियो पार्लर हुन्थ्यो ।
एक दिन साथीले क्या रमाईलो हुन्छ हिड् मिथुनको फिल्म आएको छ भन्यो । गएर सिनेमा हेरेँ बाबाले स्कुलबाट भागेर गएको कहाँबाट थाहा पाउनु भएछ । त्यो बेलामा राम्रो दाउरा भेटेको छु । म पहिला बोडिङ्ग पढेको मान्छे पछि माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा आठ नौ पढ्दा स्कुलमा फस्र्ट हुने मान्छे सेकेन्ड भएँ । त्यहाँ पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा पनि नबसि म घर गए । त्यो पछि घरमा आएर बाबाको पिटाई खाएको छु । पिटाई खाएपछि ढोका थुनेर बस्थेँ । मैले बदमासी र चकचक गर्ने अवसर स्कुल पढ्दा पाईन ।
क्यामरामा आएपछि विस्तारै खुल्नथालेँ
मेरो सिद्धान्त पहिल्यैबाट कसै संग झगडा नगरौँ भन्ने नै थियो । अहिले सम्म जीवनमा कसैको कुटाई खाएको पनि छैन पिटेको पनि छैन । पहिलो सिनेमामा भने फाईट गरेँ । मेरो विद्यालयको समय टेलिभिजन हेरेरै बित्यो । ढोका थुनेर डान्स गर्थे तर अरुको अगाडी नाँच्न मन लाग्दैन्थ्यो । क्यामरामा आएपछि थाहा छैन म कसरी खुल्न सकेँ ।
नत्र पहिला चाहिं एकदमै अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे हो । एस.एल.सी. दिदाँको खुशी भन्दा पनि परिक्षा सकेपछि हामी साथीहरु सबै जनाचार किलोमिटरको बाटो हिड्दैँ आएको थियौ त्यो निकै मज्जाको पल याद छ । रिजल्ट आएप्छि पास हुन्छु थाहा थियो त्यस्तो केही भएन । अहिले त मलाई स्कुल जान पाएको भए कति मज्जा आउँथ्यो भन्ने हुन्छ । त्यो कुरा म कहिल्यै बिर्सिन्न ।
स्कुल पढ्दा मलाई मन पर्ने विषय गणित थियो । उत्तर सिधै आउथ्यो त्यही भएर सजिलो लाग्छ । साहित्यमा म लेख्न सक्दिन्थेँ । अरुले तीनचार पेज लेख्दा मैले बल्ल आधि पेज लेखेको हुन्थेँ ।
केटीले मन पराउँछ भन्ने थाहा पाएर स्कुल नै गईन
मलाई घुमाएर कुरा गर्न आउँदैन । मेरो स्कुल पढ्दा लव नै कहिल्यै परेन । कक्षा दशमा पढ्दा एक जनाले सुन न तलाई त्यो केटीले मन पराउँछे भनेर एक जनाले भनिदिएको त्यसको तीनदिन सम्म म स्कुल नै गईन । म त्यसरी भागेँ । केटीले मलाई हेर्थिन । म पनि हेर्थे । म पनि राम्रै थिए ऊनि पनि राम्रै । राम्रो मान्छेलाई त हेर्न पाईयो नि । उनको एस.एल.सी. सकिए लगत्तै विवाह भयो । त्यो पछि मैले उनलाई भेटेको छैन । मेरो बेन्चको तीनजना साथी संग बोलचाल हुन्थ्यो । अरु संग म त्यस्तो बोल्दैनथें । फेसबुकमा यसो सम्झिएको साथीहरुलाई खोज्छु तर म भेट्दिन । किशोर अवस्थामा डर लाईलाई परेको त्यो लव कस्तो होला आफै अन्दाज लगाउन सक्दिन । मलाई एकदमै डर लाग्थ्यो । प्लस टू मेरो विरेन्द्र सैनिकबाट हो । त्यहाँको वार्डनले मलाई यो साईको हो कि क्या हो भन्थ्यो (लामो हासोँ) । म प्राय एक्लै हुन्थेँ हरेक समय । प्लस टूमा पनि लव परेन ।
कसैले रोएर “आई लवयू”भन्दैमा सेम “आई लव यू टू”भन्दिन
पहिलो प्रेम भन्या जस्तो भएन । लव भन्ने कुरा कहिल्यै परेन । म अफिस जादैँ थिए । त्यहाँ जादाँ जादैँ अर्को अफिसको केटीले हेरिरहेको हुने । हाम्रो हेराहेर हुन्थ्यो । हामी एक अर्कालाई हेरेर मुस्काउन थालेँ । त्यस पछि उनले मलाई भेट्न बोलाईन । म पनि गए । त्यहाँ हाम्रो नम्बर आदन प्रदान भयो ।
म एकछिनमा कल गर्छु अहिले ममी बाबा संग छु भने पछि म पनि फोनमा झुन्डिएर बसेँ । त्यस पछि एकछिन फोनमा कुरा भयो । अर्को चोटी भेट्न बोलाइन अनि मलाई आई लव यू भनिन । म त्यहाँ अलमल्ल परेँ । म त्यहाँ स्तब्ध भए । के भनू भयो किन भने माया प्रेममा मेरो अनुभव केही पनि थिएन । हैन हामी त्यस्तो नगरौँ हामी मिल्ने साथी मात्र हौ भने । त्यसपछि त ऊनि ग्वाँ ग्वाँ रोएर आई लव यू भनिन । ठिक छ ठिक छ आई लव यू टू आई लव यू टू भने अत्तालिएर (लामो हासोँ) । त्यो बेलामा म संग जागिर त थिएन । त्यो बेलामा ऊनि राम्रो ठाँउमा काम गर्थिन ।
त्यो बेला ऊनि संग राम्रो काम हुने आफू सगं त्यस्तो सारो पैसा नहुने । मैले अलि अलि ड्रामा र स्टेज शो गरेर पैसा कमाउँथे । मलाई शनिवार आयो कि डेटिङ्ग जाने तनावमा बस्थेँ । आफूलाई फेरी त्यो डेटिङ्ग भनेपछि मरे जान मन नलाग्ने । पहिलो डेटमा जादाँ पनि चुप लागेर बसिरहेको थिए ।
कहिले समय सकिन्छ भनेर घडी हेरेर बसेको छु । मैले धेरै शनिवार काम छ भनेर टारेँ । त्यो रिलेशसिप पनि टाढिदैँ गयो । त्यसपछि कोही रोए पनि म आई लव यू टू भन्दिन भन्ने भयो (लामो हासोँ) । त्यस पछि म यहाँ छु ।
पहिलो चोटी ससुराली जाँदा
पहिलो चोटी ससुराली जाँदा केही पनि भएन । सबैलाई चिनिसकेको थिए । म फेरी केटी माग्न आफै गएको थिए । निर्धक्क संग माग्न गए । जुन हरि सिग्देल थानकोटबाट निस्किएर आर्यन सिग्देल बनेको छु नि त्यही नै जिवनमा पाएको ठूलो खुशी हो । मलाई आफ्नो परिवार संग समय बिताउँदा र उहाँसग हुदाँको पल निकै रमाईलो लाग्छ ।
रेखा संग धेरै पछि कामगर्न पाउँदा खुशी
“रुद्रप्रियामा”हामीले भोगी रहेको र सुनिरहेको चिज देखिन्छ । त्यो चिज के हो भने कार्तिक २ गते थाहा हुन्छ । मैले न्यान बनाउँछु भनेर बिचमा सोचेको पनि हो । तर, यो सिनेमाको क्यारेक्टर जुन छ बाला भन्ने ऊ सामान्य किसान हो त्यसको लागि मैले ज्यान घटाएको हो । विदेशमा जुन पारामा सूटिङ्ग, कमाई र छायांकन हुन्छ त्यो यहाँ नेपालमा अलि फरक छ । कुनै पनि हराएको चिज भेट्दा खुशी लाग्छ । सात–आठ वर्ष पछि रेखा संग काम गर्दा त्यस्तै महसुस भयो । पारिवारिक वातावरणमा सिनेमा सकियो । फेरी काम गर्ने निर्णय जुन हामीले लियौ त्यो सहि लियौ जस्तो हामीलाई लाईरहेको छ । पहिला पहिला सिनेमामा संगै काम नगर्दा यो सिनेमामा रेखा भई दिएको भयो राम्रो गथ्र्यो होला भन्ने हुन्थ्यो । म उसकोे काम र उसलाई निकै सम्झिन्थेँ ।